सभापति पालको आक्रोश: सरकार ‘महंगीले जनताको ढाड कहिलेसम्म सेक्ने ?’ - AmsancharAmsanchar
काठमाडौँ, ६ बैशाख । नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिको सभापति निरुदेवी पालले वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन बनेसँगै मुलुकमा महंगीको सिमा नाघेको भन्दै आक्रोस जनाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सभापति पालले पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्य पदार्थमा मूल्यवृद्धि आकासिएको उल्लेख गर्नुभयो । जनताले मंहगिकै कारण दैनिक जीवनयापनमा चरम समस्या पैदा भइसकेको प्रति इंगित गर्दै सभापति पालले मुलुकमा सरकार जनताको लागि हो कि आसेपासेको लागि मात्र हो ? भनि गंभिर प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेसँगै मुलुकमा मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ । महंगिले गर्दा आम नागरिकले दैनिक जीवन विताउन समेत कठिन अवस्था बनेको छ । सरकार जनताको लागि हो कि आफ्ना आसेपासेको लागि मात्र हो ? भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्धिले सिमा नाघ्यो, सरकार मैन छ । किसानले बजार नपाउने अवस्था रहेको छ । उतपादन गरे पनि बजार छैन । सरकार आफै कालोबजारी गर्ने र कर छलि गर्नेलाई उन्मुक्ती दिने गरेको गरेको छ । मन्त्रीहरु नै अवैधलाई वैध बनाउने तल्लिन रहेका छन् । अब जनताले यो सरकारबाट के आश गर्ने ? सरकार छ कि छैन ?’
उहाँले सरकारको दुईदिन बिदाको नीतिविरुद्ध तीब्र आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने नाममा सरकारले सातामा दुईदिन विदा दिएर गलत गरेको भन्दै सभापति पालले थप एक दिन थपेर सातामा तीन दिन विदा दिन सरकारलाई ब्यङ्ग्य गर्नुभयो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने भन्दै जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार विदा दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । उहाँले ब्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो, ‘दुईदिन मात्र किन अब तीन दिन नै बिदा दिउँ । न्याय क्षेत्रको रिटका चाङका चाङ लाग्न दिउँ । संसद पनि अब गृहमन्त्रालयलाई नै चलाउन दिउँ न ।’
सिद्धान्त र प्राथमिकता विहिन विनियोजन विधेयक ल्याएको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारले भौतिक विकास र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आक्रोस जनाउनुभयो । आधुनिक प्रणालीको विकास गरी विश्वका जुनसुकै मुलुकमा बसेका नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै उहाँले कृषिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना नै आएको बताउनुभयो । दुई प्रकारको शिक्षाबाट समाजवादमा पुग्न नसक्ने दावी गर्दै उहाँले सरकारको परराष्ट्र नीति नभएको बताउनुभयो ।